Famantarana ny gazy | Shanghai Sunshine Technologies Co., Ltd.
Ny sensor sensor Non Dispersive InfraRed (NDIR) dia karazana fitaovana mahatsapa entona izay mifototra amin'ny toetra mampiavaka ny molekiola entona amin'ny fitrohana voafantina ho an'ny spektera infrared, izay mampiasa ny fifandraisana misy eo amin'ny fifantohana gazy sy ny hamafin'ny fitrohana (Lambert-Beer Law) hamantarana ireo singa entona sy ny fifantohana. Raha ampitahaina amin'ny karazana fantsom-panafody hafa, toy ny karazana electrochemical, karazana fandoroana katalika ary karazana semiconductor, ny fantsom-panafody infrared (NDIR) tsy manaparitaka dia manana tombony amin'ny fampiharana betsaka, androm-piainana lava, fahatsapana avo lenta, fitoniana tsara, mahomby, vidin'ny fikojakojana ambany, famakafakana an-tserasera sns. Izy io dia be mpampiasa amin'ny famakafakana gazy, fiarovana ny tontolo iainana, fanairana amin'ny famoahana, fiarovana ny indostria, fitsaboana sy fahasalamana, famokarana fambolena ary sehatra hafa.
Ny tombony azo avy amin'ny sensor NDIR:
1. Manohitra ny fanapoizinana, tsy misy fametrahana karbonina. Rehefa mandrefy gazy sasany ny sensor CAT dia mora ny mametraka karbaona noho ny tsy fahampian'ny fandoroana, izay mitarika ny fihenan'ny fahatsapana fandrefesana. Ny loharano sy ny sensor IR dia arovan'ny vera na sivana, ary aza mifandray amin'ny lasantsy, ka tsy hisy ny fandoroana.
2. Tsy ilaina ny oksizenina. NDIR dia sensor optika ary tsy mila oxygen.
3. Ny haavon'ny fandrefesana dia mety hahatratra 100% v / v. Satria ny mari-pamantarana famantarana ny sensor NDIR dia: rehefa tsy misy gazy azo refesina, ny hamafin'ny signal no lehibe indrindra, ary arakaraka ny maha-avo ny fifantohana azy no kely kokoa ny famantarana. Ka ny fandrefesana ny fifantohana avo lenta dia mora kokoa noho ny fandrefesana ny fifantohana ambany.
4. Fahamarinana maharitra maharitra sy vidin'ny fikojakojana ambany. Miankina amin'ny loharano hazavana ny fahamarinan-toeran'ny sensor NDIR. Raha mbola voafantina ny loharanom-pahazavana, ary azo ampiasaina 2 taona tsy misy fikajiana
5. Halavan'ny maripana marobe. Ny NDIR dia azo ampiasaina ao anatin'ny - 40 ℃ ka hatramin'ny 85